I-DragonFly Indlu Encane - i-Regina Beach, e-Saskatchewan - I-Airbnb
I-DragonFly Indlu Encane - i-Regina Beach, e-Saskatchewan
Ufuna ukwazi ukuthi kunjani ukuhlala ENDLINI ENCANE? Zama eyodwa!
Indawo yesimanje entofontofo e-Regina Beach echibini elihle leNtaba Yokugcina. Kuwuhambo lwezinyawo lwemizuzu engu-5 ukuya e-lakeshore trail, bese uhamba imizuzu engu-15 ukuya ebhishi yomphakathi yamahhala & ipaki, i-pier, izindawo zokudlela & ukuthenga.
Usofa ogcwele nombhede olala umuntu oyedwa. Ama-Skylight, ikhishi, ubhavu ongu-3. I-WiFi, 32" i-TV, i-Netflix /i-Apple TV.
Ikhishi elingaphandle (elihlanganyelwayo) kanye nompheme. Ama-BBQ, i-grididle, isiqandisi nosinki. I-Deck. Indawo yomlilo yangaphandle. Azikho IZILWANE EZIFUYWAYO. Akukho ukubhema ngaphakathi. Ayikho imicimbi.
• I-WiFi yamahhala kanye ne-32 "TV yedijithali ne-Netflix. Ine 'Home Mini' (izwi lokulawula ukukhanya, inikeza umculo, cela isimo sezulu, setha i-alamu, cela iresiphi, noma udlale i-trivial purrivial).
•	I-microwave, i-propane engu-2-burner cook-top, ifriji, usinki, umshini wekhofi we-Keurig, i-toaster, iketela. I-Blender iyatholakala uma icelwa.
•	Izinto ezibalulekile zasekhishini (izitsha, amabhodwe/amapani, izinto zokudlela, izingilazi, izinto zokupheka, njll.).
• Itiye lamahhala, ushukela, i-sweetener.
•	Amathawula okugeza, izinto zombhede nemicamelo, kanye namathawula asebhishi angu-2 kanye nengubo
yasebhishi •	Insipho, i-gel yokugeza, iphepha lasendlini yangasese, amathawula ephepha, izindwangu zokusula umlomo, namahenga wekhabethe, isambulela.
• Amafeni amabili etafula kagesi, kanye ne- 'arctic air' H2O cooler (akukho A/C). I-Propane heater & i-heater kagesi ye-ceramic ngesimo sezulu esibandayo.
• Indawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela. Ibhokisi lesikhiye le-WiFi elinokhiye womnyango.
•	Isiqwashisi somlilo, intuthu ne-carbon monoxide.
Sifake i- 'Nest Protect' kanye ne- 'Nest temperature Sensors' ukuqinisekisa ukuthi Indlu Encane ihlezi isendaweni yokushisa ekamelweni elinethezekile.
Ikhanya futhi ipholile - inezibani ezingu-2 & iminyango engu-2 ye-patio esilayidayo.
UKUBHEMA AKUVUNYELWE endlini encane, kodwa IZIVAKASHI ZIVUNYELWE ukubhema endaweni yethu yokuhlala yomlilo yangaphandle.
Ukushiya imithwalo kusenesikhathi kuvunyelwe uma ufika ngaphambi kuka-2pm ngesikhathi sokungena futhi umagange ukufika ebhishi. Sicela uhlele kusengaphambili nombungazi.
Indlu Eyakhiwe Esihlahleni enezitebhisi. Inombhede wosuku, ukukhanya kukagesi namapulagi kagesi, i-CD/stereo enomsakazo. Indawo ethokomele yokuphumula phakathi kwezihlahla ukuze uzifunde, ulalele umculo. Akukho ukulala ubusuku obubodwa okuvunyelwe endlini eyakhiwe esihlahleni. Qaphela: lena yindawo ehlanganyelwayo nezivakashi zethu ze-airbnb eziqashisa indlwana eseduze.
Bona imininingwane enikezwe ku-AirBnB yethu ku-inthanethi (i-Regina BEACH) ukuze uthole imininingwane yokuqasha yasendaweni (ama-kayak nama-paddle-board ayatholakala ukuze aqashwe ebhishi, kanye namahora/nsuku zonke, isikebhe sokudoba & ukuqashwa kwesikebhe se-pontoon edolobheni.
* Sinamakhadi Esaphulelo okuqasha ama-kayak, amabhodi okugwedla, njll. ebhishi!
-Ibhishi yomphakathi yamahhala nepaki, kanye ne-pier. Indawo yokudlala yomphakathi. I-volleyball yasebhishi.
Umzila wokuxoxa. Ukudoba. Ukuqaliswa kwesikebhe.
-9-hole golf course (with restaurant), and tennis court and Pickle Ball court.
-Ukushayela kwe-Golf (ngaphandle kwe-Papa Geordie 's)
-Local Medicine, Dispensery, and Distillery.
-Regina Beach Golf Clubhouse - igumbi lokudlela elinelayisensi, livulekele isidlo sasekuseni, isidlo sasemini nesidlo sakusihlwa. Ivulekele umphakathi.
- Indawo inezindawo zokudlela, i-ice-cream stand, ukuthenga, isitolo sokuthenga ukudla, iziteshi ezingu-2 zegesi, njll.
-Local Go-Cart track kanye nokugibela amahhashi (kuvulwa ngo-May - September).
-Sisungule i-AirBnB (ku-inthanethi) Incwadi Yeziqondiso efaka zonke izinto ongazibona, uzenze futhi udle e-Regina Beach namaphethelo!
-Imicimbi ekhethekile nomphakathi, efana namasonto amabili (May-June & September.) kanye neviki (July/August) Imakethe Yabalimi ngamaSonto. Unyaka weZwe Fair (August), ukudayiswa kwamagceke amakhulu ngonyaka (May), i-Chili Cook-off yaminyaka yonke (June), kanye neminye imicimbi efana ne-Show & Shine, Isithuthuthu, i-WinterFest kanye namakilabhu ahlukahlukene kanye nabathengi besonto, njll.
-Check iwebhusayithi ye-Regina Beach noma ikhasi le-Regina Beach FB ukuze uthole imininingwane ngemicimbi ezayo.
4.87 · 129 okushiwo abanye
--Umgwaqo othulile. Lo ngumgwaqo wokuhlala onokuthula futhi uhloniphe omakhelwane bethu, sicela ukuthi izivakashi zingenzi ukuziphatha okukhulu noma zidlale umculo omkhulu, njll. Siyabonga ngokuqonda kwakho!
- Indawo ye-greenbelt ehlotshisiwe ngaphesheya komgwaqo, nama-deer nezinye izilwane zasendle ezenza ukuvakasha okuvamile!
-Sihlanganise Incwadi Yeziqondiso yedijithali (Airbnb) nalokho okusendaweni yase-Regina Beach!
-Siphinde sibe namamephu ephepha le-Regina Beach akho namasevisi endawo.
Uma noma ubani onentshisekelo yokufunda okwengeziwe ngendlela yokuphila ye-Tiny House, ukuphila ngaphandle kwegridi noma i-grid tie solar, nanoma yimiphi eminye imibuzo, siyajabula ukuhlala phansi siphendule yonke imibuzo yakho. Abantu abaningi bafisa ukwazi ngokuphila kwe-Tiny House futhi sizuze ulwazi oluningi esithanda ukwabelana ngalo.
Uma noma ubani onentshisekelo yokufunda okwengeziwe ngendlela yokuphila ye-Tiny House, ukuphila ngaphandle kwegridi noma i-grid tie solar, nanoma yimiphi eminye imibuzo, siyajabula…